I-Penn State: I-GPA, izikolo ze-SAT & UMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe
Ukwamkela kwi-Penn State kukhuphiswano, kwaye unokufuna ngaphezulu kwamabanga amabakala kunye novavanyo lokufumana i-letters yokuwamkela. Ukubona ukuba unako ukuvunyelwa, ungasebenzisa le sixhobo samahhala e-Cappex ukuba ubale amathuba akho wokungena.
I-Penn State GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Penn State GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO WABAKHALA UKWENZA. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeeNkqubo zeeNkqubo zokuVumelanisa zika-Penn:
Phantse isiqingatha sabantwana abafaka isicelo kwi-Penn State bayamkelwa. Kwigrafu ngasentla, amachashaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza amelela abafundi abamkelekileyo. Njengoko unokubona, uninzi lwabafundi abamkelweyo banomyinge "B", kwaye badibanise izikolo ze-SAT (RW + M) malunga ne-1050 okanye ngaphezulu, kunye ne-ACT izikolo ezingama-20 okanye ngaphezulu. Ukuphakamisa amanani, kunokwenzeka ukuba ufumaneke. Efihliweyo phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka kunye nokuluhlaza luyingqombela, ngoko kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba abanye abafundi abaneGPA eziphezulu kunye namanqaku okuvavanya bafunyanwa yiPenn State.
Nangona kunjalo, i-Penn State ine- admissions ephelele , ngoko abafundi abakhanyayo kwezinye iindawo bangamkelwa nangona amabakala abo okanye amanqaku okuvavanya awona angaphantsi. Abafundi abonakalisa uhlobo oluthile lwe talente ephawulekayo okanye ibali eliphosakeleyo ukulixelela liza kubakho ukujonga ngokuthe ngangoko nokuba amanani kunye namanqaku okuvavanya aphantsi ngaphantsi kwesiqhelo. Abafaki-sicelo abaphumelele kakhulu banesincoko esiphumeleleyo , ii- letters ezinamandla zinconywa kunye nemisebenzi enomdla.
Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-Penn State kuquka ukuphumelela kunye nokugcinwa kwamaxabiso, iindleko, uncedo lwezemali kunye neenkqubo ezifundiswayo, qiniseka ukujonga iphrofayli ye - Penn admissions .
Ukuba Uthanda iPenn State, Unokuphinde Uthande Ezi Zikolo:
Abafake izicelo ku-Penn State bahlala benomdla kwiiyunivesithi ezinkulu zikawonkewonke ezineenkqubo eziqinileyo zemfundo kunye neCandelo leNgcaciso yeNCA (i-NCAA Division) I-Athletics (i-Penn State iphumelela kwiNgqungquthela ye- Big Ten ). IYunivesithi yaseMichigan , iYunivesithi yasePurdue, iYunivesithi yase- Ohio , kunye neYunivesithi yaseVirginia bonke bayathandwa ngabafake izicelo ze-PSU. Kubafaki-zicelo abaye baqwalasela iimyuvesi ezizimeleyo, i- Syracuse University kunye neYunivesithi yaseVillanova ziyaziwayo.
Amanqaku afana nePenn State
Amandla amaninzi kaRhulumente ka-Penn ayifumana indawo kwiintlu zeeyunivesithi zikarhulumente eziphezulu, iikholeji zaseMpumalanga zase -Atlantic kunye neepolishi zasePennsylvania eziphezulu . Kwakhona, ngenxa yeenkqubo zayo ezinamandla kwi-liberal nobugcisa be-liberal, i-Penn State yanikezelwa isahluko sombutho ohloniphekileyo we- Phi Beta Kappa . Ama-15% kuphela amaziko eminyaka amane anoluhlu.
UkuLawulwa kwe-Penn State kunye nokuLinda uLwazi lweDatha
UkuLawulwa kweDatha nokuLinda iNtlu ye-Penn State University. Idatha efanelekileyo yeCapepex
Igrafu ephezulu kwinqaku ingaba yinto ephosakeleyo, kuba ubuninzi beenkcukacha ezilahliwe kwaye balinde abafundi abafakwe kwiibrari bafihliwe. Kuya kuba lula ukugqiba ukuba "i-A" yamanqaku aphezulu kunye nee-SAT ezinamandla ziza kwenza i-imeyli yokwamkela inokwenzeka.
Xa sihlula idatha yolwazi oluhlaza okwesibhakabhaka noluhlaza, sinokubona ukuba ngabafundi abambalwa abane-"A" kunye nemigangatho ye-SAT / ACT eqinile angangeni kwi-Penn State. Izizathu zeyunivesithi zinokuthi zilahla abafundi ababonakalayo abafanelekayo: zinokuhluleka ukuthatha izifundo ezifanelekileyo zokulungiselela iikholeji (umzekelo, iikholeji ezingenelulwimi okanye izenzululwazi ), akukho nto ibonakalisa imisebenzi enentsingiselo ngaphandle kweklasi yokufunda, okanye isicatshulwa esincinci yesicelo.
Kwakhona, ezinye iiprogram zemfundo ezifana neprogram ye-BS / MBA yeSayensi kunye neprogram ye-premedical ye-premedical program ine-bar ephakamileyo ye-admissions kuneyona yunivesithi yonke. Ekugqibeleni, abafakizicelo kwiiprogram ezibonakalayo kunye nezobugcisa baya ku funeka bafune ukuphicothwa okanye ba ngenise iphothifoliyo.
IYunivesithi yaseBrandeis i-GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
I-Skidmore College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
I-University of Hollins GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-University of Samford i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-RIT GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IIC GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Illinois College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Kutheni Uphinda Uhlaziye Iiplastiki?
Intombi ye-Optimist nge-Eudora Welty
Novena kwiNtsapho eNgcwele
Uvavanyo lwe-Honda Civic u-2016
Ukudibanisa iMigqaliselo yeGalofu Ngubani ophefumlelweyo "Ukuhlonipha uTommy"
Iingoma ezi-9 eziphambili zeMculo ongazange uzivelele
I-CHEVALIER - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Izimpendulo zemibuzo emi-5 enomdla we-Ice Skating
Imephu Yokulinganisa: Ukulinganisa Umgama kwiMaphu
Ukuphulukisa ii-Amulets, i-Talismans, kunye ne-Fetishes
Izinto zoBugcisa kwiBhajethi
I-Bismarck State College
Umzekelo Wezivakalisi Kuzo Zonke Ixesha Lento Yokufumana
UDerrick Todd Lee
I-Alpha Decay Impendulo yeNyukliya Umzekelo Ingxaki
Iimfuno zeeAlbum eziphezulu
Inkcazo yokuSebenza kweMichiza kunye nemizekelo